“Mucaaridku Waxa ay Is Diidsiinayaan Inuu Muuse Biixi ka soo mudh-baxay karin kasta oo cidhiidhyoon cagtana saaray wadadii Qasriga Madaxtooyada…”Cali-gurey | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM “Mucaaridku Waxa ay Is Diidsiinayaan Inuu Muuse Biixi ka soo mudh-baxay karin kasta oo cidhiidhyoon cagtana saaray wadadii Qasriga Madaxtooyada…”Cali-gurey
April 9, 2017 - Written by Mustafe Faro
Hargeysa:(Hubaal)-Guddoomiye-ku-xigeenkii saddexaad ee hore ee xisbiga UCID, haatanna katirsan xisbiga KULMIYE Md. Cali Maxamed Yuusuf(cali-gurey), ayaa si qoto dheer uga hadlay waqtigii uu mucaaridka ku ahaa xisbiga KULMIYE iyo murrashixiisa sidii uu u naqdiyi jirey iyo waxyaabihii udub-dhexaadka u ahaa mucaaradadaas, isaga oo sidoo kale shaaciyey inuu haatan kamid yahay taageerayaasha ugu dhaw ee uu guddoomiye Muuse Biixi leeyahay.
Mujaahid Cali-gurey oo qoraale dheer oo arrintan kaga hadlayo soo dhigay bartiisa uu ku leeyahay Facebook-gga, ayaa dhinaca kalena dhaliilo culusu u jeediyey axsaabta mucaaridka ah ee xilligan, isaga oo sheegay inaanay awood u lahayn inay wax u dhaliilaan sidii uu ahaan jirey waqtigii uu mucaaridka ahaa.
Qoraalka uu Cali-gurey bulshada la wadaagay, ayaa waxa uu u dhignaa sidatan:
“Wax kasta uu Caligurey yidhi waxa yidhi Caligurey goor iyo xaalad uu joogay ee Ilaahay ma odhanin. Taasi maalinteedii iyo xaaladeedii bay ahayd UCID oo mucaarid ah oo dagaal qadhaadh ku jiray baan ahaa. Maanta waa maalin kale waayihii shalay joogay maanta ma joogaan. Musharixii aan maalintaa taageersanaa ayaaba Kulmiye ku biiray dantiisa iyo mustaqbalkiisa siyaasaddana u arkay inay ku jirto. Anigu dan shakhsi ah oo siyaasadeed ma lihi waxa aan wax ku kala doortaana maaha dan shakhsi ama dan gaar ah oo qofeed ama reer ama kooxeed. Nimcada ugu wayn ee Ilaahay uu gaarka u siiyay dadku waa Caqliga maalinta qiyaamahana Ilaahay wuu waydiin doona qof kasta oo wuxu yidhi, (WA-LA TUSALUNNA YOMA IDIN CANI NACIIM). Rasuulkeenuna NNKH eh waxa laga soo weriyay inu: wax waliba wuxu leeyahay aalad aaladda basharkuna waa caqliga( INNA LI KULI SHAYIN AALAH WA AALATUL BASHAR AL-CAQL).
Mucaaridka maantu waa fulay waana dad ducafo ah oo aan kaalintii aan kaga jiray mucaarika markii aan mucaaridka ahaa buuxin karin. Waxa keliya ee hub u noqday wixii Caligurey berigii uu mucaaridka ahaa yidhi oo sax iyo qalad labadaba noqon kara. Sababo dhawr ah ayaa ku kelifaya ta ugu waynina waxay tahay ma hayaan wax ay dadka u sheegi karaan oo ay taageeradooda ku kasban karaan. Dhinaca kale waxay arkayaan oy is diidsiinayaan xaqiiqada hortooda taal oo ah inu Muuse Biixi ka soo mudh-baxay karin kasta oo cidhiidhyoon hadana cagta saaray wadadii Qasriga Madaxtooyada oon wax kale daayoo qodaxna lahayn, waayo ma jiro oo may keensanin musharax la tartami kara oo kaga adkaan kara doorashada. Caligureyna hadii uu ku qanacsan yahay uu arkayo musharax uu aaminsan yahay inu Muuse Biixi u dhaami karo Somaliland beri hore ayuu taageeri lahaa lakiin ma arko mana jiro. Cid ula timi oo ku qancisay uu ka diidayna ma jirto mana ahaa geed meel ka baxay ee waa qof hadii gurigii uu yaalay ku xumaado iskaga guuri kara. Wax intaa ka badan uu sameeyayna ma jirto xaqna wuu u leeyahay ee waa kuma ninka hooyo dhashay ee ka horjoogsan karaa.” Sidaas waxa yidhi Cali Maxamed Yuusuf(cali-gurey).